China ingxubevange Inconel 718 Round Ibha ifektri kanye nabaphakeli | I-TISCO
Inconel 718ingxubevange yeNickel-Chromium iba yimvula enzima futhi inamandla amakhulu okuqhekeka emazingeni okushisa aphezulu afike cishe ku-700 ° C (1290 ° F). Inamandla aphakeme kune-Inconel X-750 nezakhiwo ezingcono zomshini emazingeni okushisa aphansi kuneNimonic 90 neInconel X-750.
Ukwakhiwa Kwamakhemikhali kwe-Inconel 718
I-Ni + Co
Izakhiwo Ezijwayelekile ze-Inconel 718
7.2 × 10-6 ku / ngaphakathi. ° F
Ibha Eyindilingaiyisitokisi sebha yensimbi ende, eyindilinga enezinhlelo eziningi zezimboni nezentengiso. Isicelo esivame kakhulu yimiphini. Ububanzi obujwayelekile busuka ku-1/4 ″ kuze kufike ku-24 ″. Abanye osayizi bangatholakala. I-Round Bar iyatholakala ezinhlotsheni eziningi zensimbi kufaka phakathi i-Hot-Rolled Steel, i-Cold-Rolled Steel, i-Aluminium, i-Stainless Steel nokuningi.
Langaphambilini 2b 304 316 insimbi engagqwali ishidi / insimbi engagqwali ipuleti
Olandelayo: NO.4 ibhulashi HL 304 316 304L 316L 309 321 insimbi engagqwali ishidi insimbi engagqwali ipuleti
inconel 718 bar oyindilinga
ibha eyindilinga ye-nickel